Manufacturer Aluminum Professional ee dunida Tan iyo 1999
Hongbao Aluminum ayaa guud ahaan awoodda wax soo saarka sanadlaha ah ee 250,000 oo ton goobo aluminium ton, sheet, strip iyo bireed. Hongbao ayaa leh 1 + 4 tusmo line kulul rogid, 4 khadadka-soo-saarka dhagax qabow, khadadka-soo-saarka cajaladood 8 aluminium iyo 4-soo-saarka aliminiyum line.We qalabaysan ayaa ah kooxda iibka xirfad, waxay ku guuleysto geeddi socodka technology iyo wax soo saarka ugu fiican, ayaa sano waayo-aragnimo ee iibka ganacsiga shisheeye, iyadoo macaamiisha ay awoodaan in ay muuqan isgaadhsiin iyo si sax ah u fahmaan baahida dhabta ah ee macaamiisha, macaamiisha siiyaan adeeg shakhsi iyo waxyaabaha u gaar ah.
Aluminum Circle meelaha banaan
24 saacadood adeeg online
gaarsiinta Fast ka dib markii si
control adag oo tayo leh by injineer
3003 saxan aluminium taxane waa wax soo saarka badan ee la isticmaalo ee aluminium iyo taxanaha daawaha manganese. Sidaas darteed ka mid ah xubno ka daawaha manganese, taas oo waxyaabaha leeyihiin guryaha anti-miridhku ku fiican, sidoo kale loo yaqaan aluminium miridhku ku-caddayn. sifo: 3003 ee daawaha AL-Mn, waa kuwa ugu ballaaran loo isticmaalo rus a ...
qanacsanaanta macaamiisha waa goolka, daacad iyo rajeynayaa in la dhiso muddo dheer marka la eego xidhiidhka iskaashi deggan macaamiisha in ay si wada jir ah u horumariyaan suuqa. Dhisidda berri cajiib wada! Shirkadda Our tixgeliyo "qiimaha macquulka ah, mar-soo-saarka hufan iyo adeegga wanaagsan ka dib iibka" sida rogo oo. Waxaan rajaynaynaa in ay iskaashi la macaamiisha dheeraad ah horumarinta iyo labada dhinac. Waxaan soo dhawaynaynaa iibsada iman kara in ay nala soo xiriir.